'पार्टी बैठक बसाले जस्तोसुकै कदम चाल्छु'
‘पार्टी बैठक बसाले जस्तोसुकै कदम चाल्छु’
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बैठक बोलाएर केही निर्णय लिन खोजे आफूले ठूलो एक्सन लिने चेतावनी दिन थालेका छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग बहुमतको निर्णय नमान्ने र पार्टी बैठक बोलाए आफूले लिन निर्णयको सामना गर्न तयार रहन चेतावनी दिन थालेका हुन्। नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएजस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले अब सँगै अगाडि बढ्न नसक्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति साँचो रहेको पनि स्पष्ट पारे। ओलीले प्रचण्डलाई पार्टीका कुनै पनि कमिटीको बैठक नमान्ने बताउँदै सल्लाह गरेरै अलग-अलग हुन प्रस्ताव गरेको कुरा साँचो रहेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले हामीलाई जानकारी दिनुभएअनुसार अर्का अध्यक्ष ओलीले बैठकको केही काम छैन, बैठक बसेर के गर्ने भनेर भन्नुभयो र बैठक बस्न अस्वीकार गर्नुभयो भनेर सुनाउनुभयो। बैठक किन बस्न काम छैन भन्दा बैठकको निर्णय त मान्दै-मान्दिनँ तपाईँहरूले बहुमतले निर्णय गरेर हुन्छ ? केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गर्नुस्, स्थायी कमिटीबाट निर्णय गर्नुस्, सचिवालयको निर्णय गर्नुस् तर बहुमतले गरेको निर्णय म मान्दिनँ। भनेपछि तपाईंहरुले बैठक गरेर के गर्नुहुन्छ ? यति भन्दाभन्दै पनि तपाईंहरुले आफ्नै तर्फबाट बैठक बोलाउनुभयो भने बैठक बोलाउना साथै म ठूलो अर्को एक्सन लिन्छु त्यसको सामना गर्न तपाईंहरु तयार हुनुहोस्। अथवा सल्लाह गरेर अलगअलग होऔं। अब एकै ठाउँ बस्न सकिन्नँ भनेर भन्नुभएको कुरा हामीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो,’ उनले भनेका छन्।
नेकपालाई विभाजनमा जान नदिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फेरि एक पटक अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। उनले पार्टीभित्र देखिएको मतभिन्नता अन्त्य गरी एकतालाई कायम राख्न पनि अध्यक्ष प्रचण्डले नै संवादका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले के भन्यौं भने हामीले ठुलो मिहिनेत गरेर पार्टी एकता गरेको हो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्ने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल बनाउने, समाजवादको आधार तयार पार्ने र अन्ततः समाजवादमा जाने उद्देश्यले पार्टी एकता गरिएको हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठ भनेका छन्।
उनले पार्टी एकता ठुलो मिहिनेत गरेर र क्रान्तिकारी उद्देश्यलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गरिएकाले यसलाई अहिले नै विफल हुन र फुटको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन सबै नेता कार्यकर्ताले पहल गर्नुपर्ने बताए। एकता कायम गर्न पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउने र पार्टीको निर्णय सबैले मान्दै कार्यान्वयनमा जाने हो भने पार्टी एकता जोगिने पनि श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘त्यसैले ख्याल ख्यालमै पार्टी फुटको दिशातिर जान हुन्न। हामीले पार्टी एकताको रक्षा गर्न पहल नै गर्नुपर्छ। प्रयत्न नै गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि एक चोटि अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुराकानी गर्नुहोस्, बैठक बसौं भनेर बैठक राख्ने नै प्रयत्न गरौँ। बैठक राखेर सबै पक्षमा छलफल गरौँ, खुला ढङ्गले छलफल गरौँ र पार्टी एकताको निम्ति प्रयत्न जारी राखौं, पार्टी एकता कायम गर्नै पर्छ त्यसको निम्ति पहल गरौँ भनेर हामीले भनेका हौँ। त्यसपछाडि उहाँहरूको कुराकानी भएको स्थिति छैन।’